တရုတ်ပြည် မှ ပြန်လာသော မုံရွာက ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ဒုမန်နေဂျာအား ပြည်သူများ ဖမ်းဆီး ဆေးရုံပို့ – GuGuGarGar
WK | February 1, 2020 | Local News | No Comments
တရုတ်ပြည် မှ ပြန်လာသော မုံရွာ က ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ဒုမန်နေဂျာအား မုံရွာမှ တာဝန်သိ ပြည်သူများ လမ်းမှာ တားဆီး၍ စစ်ဆေးရန် ဆေးရုံသို့ပို့….
အခုပဲ ဝမ်ပေါင် လက်အောက် ကုမ္မဏီတစ်ခု ရဲ့ ဒုမန်နေဂျာ တရုတ်က ပြန်လာတယ် မန်းလေးလေဆိပ်ကနေ မုံရွာလာမယ် ကြားလို့ မုံရွာ တိုးဂိတ်ကနေ သွားစောင့်ပြီး မုံရွာဆေးရုံကြီးမှာ စစ်ဆေးဖို့ ပို့ခဲ့ပြီး စစ်ဆေးတာ မဆေးတာတော့ အစိုးရ အလုပ် ကိုယ့်တာဝန်ကတော့ တာဝန်သိပြည်သူ တစ်ယောက်အနေနံ့ သတင်းရလို့ မေတ္တာရပ်ခံခေါ်ဆောင် ပို့ခဲ့ပြီးပါပြီ။
၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီက လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းတွင် တရုတ်ပြည်မှ ယမန်နေ့က ပြန်ဝင်လာသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ဒုမန်နေဂျာကို လုပ်ငန်းခွင်ထဲသို့ အ၀င်ခံပြီး လက်ခံလိုက်သဖြင့် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၀၀၀ ကျော် အလုပ်မဆင်းတော့ကြောင်း အလုပ်သမားများထံ သိရှိရသည်။
၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ စီနိုဝမ်း ဆိုက်မှ အလုပ်သမား တစ်ဦးကမူ ယမန်နေ့က တရုတ်ပြန်ဝင်လာသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား ဒုမန်နေဂျာထံတွင် ၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပါလာမည်ကို အလုပ်သမားများက စိုးရိမ်နေကြကြောင်း၊ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအနေဖြင့် တရုတ်ပြည်မှ ပြန်ဝင်လာသည့် တရုတ်နိုင်ငံသားများကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း၊ သီးခြားခွဲခြား၍ စောင့်ကြည့်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်မှု မရှိ၍ စိုးရိမ်မိသည်ဟု ဆိုသည်။ Ko Aung Nay Myo
တရုတျပွညျ မှ ပွနျလာသော မုံရှာ က ဝမျပေါငျကုမ်ပဏီ ဒုမနျနဂြောအား မုံရှာမှ တာဝနျသိ ပွညျသူမြား လမျးမှာ တားဆီး၍ စဈဆေးရနျ ဆေးရုံသို့ပို့….
အခုပဲ ဝမျပေါငျ လကျအောကျ ကုမ်မဏီတဈခု ရဲ့ ဒုမနျနဂြော တရုတျက ပွနျလာတယျ မနျးလေးလဆေိပျကနေ မုံရှာလာမယျ ကွားလို့ မုံရှာ တိုးဂိတျကနေ သှားစောငျ့ပွီး မုံရှာဆေးရုံကွီးမှာ စဈဆေးဖို့ ပို့ခဲ့ပွီး စဈဆေးတာ မဆေးတာတော့ အစိုးရ အလုပျ ကိုယျ့တာဝနျကတော့ တာဝနျသိပွညျသူ တဈယောကျအနနေံ့ သတငျးရလို့ မတ်ေတာရပျခံချေါဆောငျ ပို့ခဲ့ပွီးပါပွီ။
ဝမျပေါငျ ကုမ်ပဏီက လုပျကိုငျလကျြရှိသော လကျပံတောငျးတောငျ ကွေးနီ စီမံကိနျးတှငျ တရုတျပွညျမှ ယမနျနကေ့ ပွနျဝငျလာသညျ့ တရုတျနိုငျငံသား ဒုမနျနဂြောကို လုပျငနျးခှငျထဲသို့ အဝငျခံပွီး လကျခံလိုကျသဖွငျ့ မွနျမာအလုပျသမား ၁၀၀၀ ကြျော အလုပျမဆငျးတော့ကွောငျး အလုပျသမားမြားထံ သိရှိရသညျ။
ဝမျပေါငျကုမ်ပဏီ စီနိုဝမျး ဆိုကျမှ အလုပျသမား တဈဦးကမူ ယမနျနကေ့ တရုတျပွနျဝငျလာသညျ့ တရုတျနိုငျငံသား ဒုမနျနဂြောထံတှငျ ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈပိုး ပါလာမညျကို အလုပျသမားမြားက စိုးရိမျနကွေကွောငျး၊ စဈကိုငျး တိုငျးဒသေကွီး အစိုးရအနဖွေငျ့ တရုတျပွညျမှ ပွနျဝငျလာသညျ့ တရုတျနိုငျငံသားမြားကို ကနျြးမာရေးစဈဆေးခွငျး၊ သီးခွားခှဲခွား၍ စောငျ့ကွညျ့ခွငျးမြား လုပျဆောငျမှု မရှိ၍ စိုးရိမျမိသညျဟု ဆိုသညျ။ Ko Aung Nay Myo
ယခု လ အတွက် အောင်ဘာလေသိန်း (၁၅၀၀၀) ကံထူးရှင် ပေါ်ထွက်လို့ လာပါပြီ
ပုဂံနယ်မြေရှိ ရှေးဟောင်းကုန်း တစ်ခုပေါ်သို့ ကားဖြင့်တက်၍ အရက်သေစာသောက်စားခဲ့သည့် တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို ဒဏ်ငွေ(၃)သိန်းစီပေးဆောင်ရန် အမိန့်ချ
“ကျွန်တော် တို့အနေနဲ့ နောက်ထပ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အစိုးရကိုထပ် လိုချင်လို့လား” ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်း မေးခွန်းထုတ်